MUQDISHO: Caasimaddu Federaaleynta Dalka ma ka mid tahay, Mise Maya? [W/Q: Maryan Carif] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Muqdisho oo ah caasimada Soomaaliya, sida ku qoran dastuurka kmg ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya,
waxay ka mid tahay magaalooyinka qadiimka ah ee dalka. Taariikhdeeda la hubo waa 1.200 ilaa 1.300 sannadood. Dhismooyinka taariikhiga ah ee aan aasmin waxaa lagu qiyaasaa in cimrigoodu kun sannadood kor u dhaafay. Magaca maagalada waxaa lagu fasiraa inuu ka soo jeedo Fadhiga Shaaha Persia (Maqcadu Shah).